Kukho okungaphezulu kweNdlela enye yokuhlala ephezulu kwiMithwalo enzima yokuFunda
Iqondo lokufunda ngaphandle kweklasi elifunekayo kwiikholejini lingaba lukhulu kakhulu. Ukuba untsha kwikholeji, umthwalo wakho wokufunda unokuphakama kakhulu kunezinto ozifundileyo esikolweni esiphakeme; ukuba uneminyaka ephakamileyo kwikholeji, inqanaba libonakala likhuphuka ngonyaka, njengoko ucinga ukuba ulungelelanise. Kungakhathaliseki ukuba yintoni imeko yakho, ukwazi indlela yokuqhubeka nokufunda iikholeji kunokuba ngumngeni omkhulu.
Ngethamsanqa, akukho "indlela efanelekileyo" yokuhlala kwindlela kunye nomthwalo wokufunda wakho. Isisombululo esilawulekayo sivela kukufumana into eyenza isitayela sakho sokufunda - kwaye ekuqapheliseni ukuba ukuguquguquka kuyinxalenye yiphina isisombululo sexesha elide.
Umzobo Wendlela Ongcono Ngayo Yenza Intuthuko Ekufundeni kwakho
Ukugqiba ukufunda kwakho okubelwe kungaphezulu kokutshekisha amehlo akho kwiphepha; Ukuqonda nokucinga ngezinto eziphathekayo. Kwabafundi abathile, oku kufezekiswe ngokugqithiseleyo, kanti abanye bafunda kakuhle ngokufunda ixesha elide. Cinga kwaye uze uzame oko kusebenza kakuhle kuwe. Ngaba ugcina ngaphezulu ngokufunda kwixesha eli-20 lomzuzu? Okanye ufunda ngcono ngokuchitha iyure okanye ezimbini ukudibela ekufundeni kwaye ungenzi nto na? Ngokufanayo, ngaba kufuneka ube nomculo wangemuva, ube ne cafe enkulu, okanye ube nokuthula kwelayibrari? Umfundi ngamnye unendlela yakhe yokwenza umsebenzi wesikolo ngokufanelekileyo; sibone indlela efanelekileyo ngayo.
Ishedyuli yokuFunda ixesha kwiKhalenda yakho
Uninzi lwabafundi lukulungele ukuhlela izinto ezifana neentlanganiso zeqela, imidlalo yebhola, iiklasi kunye neminye imisebenzi kwimakhalenda abo. Izinto ezongezelelweyo, njengomsebenzi wesikolo kunye nokuhlamba impahla , ngokuqhelekileyo ziyakwenziwa kuphela xa kunokwenzeka. Olu hlobo lwesilungiso sokurhoxiswa ngokufunda kunye nezabelo, nangona kunjalo, kunokukhokelela ekumanyeleni nasekugqibeleni imizuzu yokugqibela.
Ngenxa yoko, bhala phantsi (kwaye qiniseka ukuba uqhubeka) ixesha kwishedyuli yakho ukwenza ukufunda kwakho ngeveki. Ukuba unokwenza i-aphoyintimenti ukuya kwiintlanganiso zebhola, ngokuqinisekileyo unokwenza iseshoni esifanayo ukuze ufunde ukufunda kwakho.
Abanye abafundi bathabatha amanqaku; abanye abafundi baqokomisa; abanye abafundi benza ii-flashcards; abanye baneenkqubo zabo ezisebenzela zona. Ukufunda kwakho kubandakanya okungakumbi kunokufumana nje ukusuka kwiphepha 1 ukuya kwiphepha 36; kuquka ukuqonda oko ufundayo kwaye, mhlawumbi, kufuneka usebenzise olo lwazi kamva (njengaxa uvavanyo okanye iphepha). Ukuthintela ukuba ufunde kwakhona kamva, sebenza ngempumelelo ngexesha lokufunda kwakho kuqala. Kulula kakhulu, emva koko, ukubuyela kumanqaku akho kunye neengqapheli zamaphepha 1-36 kunokuba uphinde uphinde uphinde uphinde ufunde onke amaphepha angama-36 ngaphambi komzuzu.
Qaphela ukuba awukwazi ukwenza yonke into eyenziwe Yonke ixesha
Kuyinto eyiyo inzima - kunye nobuchule obukhulu bokulawula ixesha - ukuba uqaphele ukuba ukwenza i-100% yokufunda kwakho i-100% yexesha iphantse (ukuba akunjalo) akunakwenzeka kwiikholeji. Kubalulekile ukuba ufunde oko awukwazi ukukwenza kwaye uhambe ngokuhamba kwexesha ngezinye. Ngaba unokusebenzisana nabanye abafundi ukuba udibanise ukufunda, uze uxoxe ngeqela emva koko?
Ngaba unokuvumela into ethile ukuba ihambe eklasini sele uqhuba kakuhle kwaye ugxininisa ngakumbi kwiklasi oyilwela kuyo? Ngaba unako ukukhangela iimpahla kwikhosi enye, ngaloo ndlela uzivumela ukuba ufunde izinto zezinye iikholeji kunye nexesha kunye nokuqwalasela? Ngamanye amaxesha, awukwazi ukufumana konke ukufunda kwakho ekolishi, kungakhathaliseki ukuba uzama nzima kangakanani okanye iinjongo zakho zinjani. Kwaye nje ngokuba lo mzekelo kwaye awuyiyo umgaqo, ukufunda indlela yokuguquguquka kunye nokwenza utshintsho kwizinto onokukwazi ukuzifeza, ngokwenene, kukukhokelela ukuba ube nosebenza ngakumbi kwaye uvelise oko unokukwazi ukukwenza kuyenza.
Impumelelo yokuvelisa iNtlukwano kwiNzululwazi
Ikholeji yaseCompordia kwi-Adorhead Admissions
Ukubulawa kweNanking, ngo-1937
I-Agatha Christie's Mystery Plays
ISikole sikaMichael G. Foster wezoRhwebo kwiYunivesithi yaseWashington
Iimoto 2 Iimoto eziqhelekileyo
Imbali ye-Ancient Physics yeGrike
Ngaba Unokuthi - Umdlalo weClassier Classroom Game wabadala
I-Schrader Valve kwiTyhuse yaseTire
Inkcazo yeHypertonic kunye nemizekelo